Bhaibheri Rinotii Nezvezvishongo Uye Kupoda poda?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Catalan Cebuano ChiSutu (South Africa) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwanyama Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Myanmar Norwegian Nzema Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tigrinya Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa
Kunyange zvazvo Bhaibheri risinganyanyi kutaura nezvenyaya iyi, hapana parinorambidza kupoda poda, kupfeka zvishongo kana zvimwewo zvinoita kuti munhu aratidzike zvakanaka. Bhaibheri harinyanyi kutaura nezvekunaka kwakaita munhu nechekunze, asi rinokoshesa kuva ‘nechipfeko chisingaori chemweya wakanyarara uye munyoro.’​—1 Petro 3:3, 4.
Kuzvishongedza hakuna kuipa
Vakadzi vakatendeka vanotaurwa muBhaibheri vaizvishongedza. Ribheka akazoroorwa naIsaka mwana waAbrahamu, aipfeka rin’i yepamhino yegoridhe, zvishongo zvemumaoko zvegoridhe uye zvimwe zvishongo zvaidhura zvaakatumirwa nevaizova tezvara vake. (Genesisi 24:22, 30, 53) Saizvozvowo, Esteri akabvuma kuzorwa “mafuta okutsvindisa” paakanga achigadzirira kuzova Mambokadzi wePezhiya. (Esteri 2:7, 9, 12) Mafuta aakazorwa anogona kunge aisanganisira “zvinonhuwirira nezvimwe zvinoruramisa ganda.”​—Bhaibheri rine Apokirifa.
Bhaibheri rinopa mienzaniso inoratidza kuti zvishongo zvakanaka. Semuenzaniso munhu anopa zano rakanaka anonzi akaita ‘semhete yendarama kunzeve inomunzwa.’ (Zvirevo 25:12) Mwari pachake anofananidzawo mabatiro aiita rudzi rwaIsraeri nezvinoitwa nemurume anoshongedza mudzimai wake nemhete, zvishongo zvemumaoko uyewo zvemuhuro. Zvishongo izvi zvakaita kuti rudzi urwu rwuve ‘rwakanaka kwazvo.’​—Ezekieri 16:11-13.
Nhema dzinotaurwa nevanhu pamusoro pezvishongo uye kupoda poda
Zvavanofunga: Pana 1 Petro 3:3, Bhaibheri rinorambidza ‘kuruka bvudzi uye kupfeka zvishongo zvendarama.’
Chokwadi nezvenyaya iyi: Mashoko akapoteredza vhesi iyi anoratidza kuti Bhaibheri raitaura musiyano uri pakati pekuva nemwoyo wakanaka uye kupfeka zvishongo zvakanaka. (1 Petro 3:3-6) MuBhaibheri munewo mamwe mavhesi anotaura izvozvo.​—1 Samueri 16:7; Zvirevo 11:22; 31:30; 1 Timoti 2:9, 10.
Zvavanofunga: Zvakaitwa naMambokadzi akaipa Jezebheri ‘zvekupenda maziso ake nezvizoro zvitema’ zvinoratidza kuti kupoda poda hakuna kunaka.​—2 Madzimambo 9:30.
Chokwadi nezvenyaya iyi: Jezebheri aiita zveuroyi uye akanga ari muurayi. Akanzi aiva nemhosva nekuda kwemabasa ake, kwete kupoda poda kwaainge akaita.​—2 Madzimambo 9:7, 22, 36, 37.
Mwari Ane Hanya Nevanhukadzi Zvechokwadi Here?
Unofunga kuti Bhaibheri rinozvidza vanhukadzi here? Dzidza maonero chaiwo anoitwa vanhukadzi naMwari.